Iyo Bhatani Rekutenga Rinobatsira Zvemagariro Midhiya Attribution uye ROI? | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2015 China, November 5, 2015 Douglas Karr
Tenga mabhatani ndiwo anopisa nyowani maficha munzanga midhiya, asi iwo haasi kuwana yakawanda traction. Muchokwadi, iyo Invesp Ongororo yakawana kuti yekutengesa zvemagariro evanhu yakagadzira chete 5% yemari yepamhepo yekutengesa mu2015. Nzvimbo zhinji dzezvemagariro dzichiri kunetsekana kuwana kuvimba kwevatengi, saka mapuratifomu achazoda kuratidza kuti ivo vanopfuura kungoziva zvemagariro kuti uvakunde.
Ini ndichiri kudziya pane kufarirwa kwemagariro kutenga mabhatani panguva ino. Hazvireve kuti ini handidi kuzviita - Ndine chokwadi chekuti pane yakanaka ROI mune chero kuita. Mumwe munhu anozobaya uye atenge!
Zvinozivikanwa ruzivo kuti kiyi yekuwedzera pamhepo kutendeuka mitengo ndeye kudzora matanho anodikanwa kuti ushandure. Uine izvo mupfungwa, zvinongonzwisisika kuti kuisa isina musono bhatani bhatani pakutanga kwazvo mune fanera rekutenga zvine musoro. Asi hazvisi izvo zvine musoro. Shanduko yekushandura iri kupfupisa nhanho dzakatorwa kubva pasarudzo yekutenga kuenda kushanduko… dambudziko nderekuti vezvenhau vezvemagariro havaite sarudzo yekutenga.
Kuchinja here ikoko? Ndine chokwadi kuti zvichadaro. Sezvo vatengi vanovimba zvavo zvemagariro zvikwama zvakawanda uye nyaya dzebasa rakakura dzinotanga kurova pamusika, vangangoshandisa nzira idzi zvakanyanya. Nekudaro, ini handitomboona zvemagariro seyakavimbwa svikiro zvakadaro. Uye kuvimba ndiyo kiyi yemhedziso yekukunda sarudzo yekutenga
Hapana kana emamwe mapuratifomu ane nhamba yaunogona kufonera panguva ino kana uchinge wapinda mudambudziko (pamwe vanoita nekutenga, handina chokwadi). Ini ndinonyatsoda kubaya tenga uye kutumira odha mugomba rakadzika-dzika, ndichifunga kuti ndichagamuchira zvinhu zvangu here, uye ndichifunga kuti ndowana kupi rutsigiro kana ndikasatambira?
Pinterest inoita senge yakanyanya kukodzera saiti yenzvimbo panguva ino sezvo vazhinji vevateereri vavo vatotenga uye Pinterest chiteshi dzinogona kuratidza zvakanyanya masayiti kana mhando dzakasimudzirwa.
Heano mimwe mienzaniso yemagariro kutenga bhatani rekushandisa
Facebook Tenga Bhatani:
Twitter Tenga Bhatani:
Pinterest Tenga Bhatani:
Instagram Tenga Bhatani:
Tags: basatenga bhatanifacebook tengainstagram kutengainvestpinterest tengatwitter tenga